Latilayaha amniga Qaranka Mudane Cabdisaciid oo go’aan lagu gooray in la siiyo kursi kamid ah Golaha Shacabka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 21 March 2021 23 March 2021
Kadib shir maalmo badan ka socday magaalada Burtiinle kaa oo looga hadlayay matalaadda reer Mahad Cumar Maxamuud ee dowladda Federalka kaa oo qaatay muddo dhan 11-kii ilaa 17-kii March ayaa laga soo saaray go’aamo wax ku ool ah.
Goo’aamada shirka ka soo baxay waxaa kamid ah in Beesha xubin matalaad ah ku yeelato Dowladda Federalka gaar ahaan golaha Shacabka oo ay qaadato mid kamid ah kuraasta Beesha Cumar Maxamuud ay ku leedahay Baarlamaanka Federalka.
Shirka waxay ku go´aamiyeen Nabadoonada, Odoyaasha iyo waxgaradka Beeshu in xubinta beesha reer Mahad ka heshay Cumar Maxamuud inay siiyaan Mudane Cabdisaciid Muuse Cali kadib markii ay isa soo sharaxeen 7 qof oo kale.
Cabdisiciid ayaa afartii sano ee uu ahaa Lataliyaha Amniga Qaranka waxa uu si dhaw ula shaqeeyay Madaxweynaha Jamhurriyadda Federalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga isaga oo door weyn ka qaatay masiirka arrimo waaweyn oo dhanka amniga ah.
Waxaa xusid mudan in Mudane Cabdisaciid uu yahay aqoonyahay ka soo baxay mid kamid ah Jaamacadaha ugu hormarsan caalamka waxaana uu la soo shaqeeyay hay’ado caalami ah.
Waxyaabaha sida weyn uu uga shaqeeyay waxaa kamid ah amaanka guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo horumar weyn laga gaaray iyada oo ay xusid mudantahay inuu si dhaw ula shaqeeyo hay’adaha iyo dowladaha waaweyn ee taageerada siiya ciidanka sidoo kale siiya tababarada.
Cabdisaciid ayaa si weyn kaga shaqeeyay adkeynta amaanka Internetka madaxda dalka, sidoo kale waxa uu ka shaqeeyay in dowladda ay kameysay aaladaha laga sameeyo waxyaabaha qarxa, waxaana uu tilmaamay iney hadda ka shaqeynayaan sidii looga xadidi lahaa ganacsatada soo dajiso waxyaabaha laga sameeyo waxyaabaha qarxa.
Waxayaabaha saameynta leh ee uu ka shaqeeyay islamarkana uu wali ku howlanyahay waxaa kamid ah in la joojiyo canshuurta Al shabaab ay ka qaadaan ganacsatada.
Lataliyaha Amniga Qaranka ayaa dowlado badan oo Soomaaliya ku daneysan jiray waxa uu u sheegay iney raali ahaadaan oo aan la joogin xiligii dowlad walba waxa ay rabtay ka sameysaneysay dalka waxaana uu si gaar ah u xusay in arrimahaasi laga hor tagay.
Mudane Cabdisaciid ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaatay in mushaarka loo kordhiyo ciidamada xoogga dalka sidoo kale waxa uu tilmaamay in hadda waxbadan laga badalay amaanka islamarkana meesha laga saaray hub iyo rasaas dadka iska soo galo, waxa uu hoosta ka xariiqay in askari walba aqoonsi leeyahay, qoriga uu watana uu yahay mid diiwaan gishan.
Lataliyaha amniga Qaranka ayaa ah shaqsi ay ku weyntahay Soomaalinimada isagoo danaha qaranka si weyn uga shaqeeyay, waana mas’uul mudan in loo doorto Xildhibaan Golaha Shacabka.